Baarlamaanta itoobiya oo ansixiyey sharciga xuduudaha iyo aqoonsiga! – Xeernews24
Baarlamaanta itoobiya oo ansixiyey sharciga xuduudaha iyo aqoonsiga!
Barlamaanka itoobiya ayaa ansixiyey, komishinka xuduudaha maamul-goboleedyada iyo aqoonsiyada (Regional boundaries and identity issues Commission) Qorshan oo in muddo ah ba la filayey in cod loo qaado ayaa maanta la meelmariyey. Sidda la sheegay, shaqada la rabo in komishinkani qabta sharci ahaan waxaa iska leh, golaha federayshinka. Waxaa jiray xildhibaanno ka dooday oo arrintaas sharci-darro ku tilmaamay. Laakiim nasiib daro si duuduub ah ayaa loo ansixiyey.
Guddigu waxa uu ka koobnaan doonaa, lix sharci yaqaan, saddex golaha federayshinka laga soo xulayo iyo laba qof oo reysalwasare Abiy ahmed magacaabayo (11 xubnood). Waxaa loo badinayaa qorshahani inuu yahay mid ay soo agaasimeen labada qowmiyadood ee ugu tirada badan (Oromada iyo axmaarada) waxaana la saadaalinayaa inay si farsamaysan ugu la wareegi doonaan dhulal horleh!
Muddo labo sanno ah waxaa ka socda xuduudda Soomaalida iyo oromada dagaallo ku salaysan dhul, hadda ba su’aashu waxay tahay guddigan oo kollaba u badnaan doona oromo iyo axmaaro ma noqon doonaa mid dhex-dhexaad ah? Mise dhul horleh oo soomaaliyeed ayaa lagu qaadan doonaa?
Dhawr toddobaad ka hor uun bay ahayd markii uu madaxwayne mustafe warbaahinta ka sheegay inayna taako dhul Soomaaliyeed ah bixinayn oo oo ayna ka tanaasulayn arrintaas na halka dadku ka taagan yahay uu iska ka taagan yahay. Balse waxay su’aashu tahay, madaxwayne mustafe ma waxa uu sii ogaa arrintan oo uu xog ogaal u ahaa? Waa su’aal lays waydiin karo oo meesha ku jirta!
Waxaa kalo meesha ka muuqan gudi la sheegey dhowr bilood ka hor in ay soo qiimayn doonaan xuduudaha gaar ahaan Soomaalidda iyo Oromadda oo ay ka mid ahaayeen madaxweyna ku xiggenka Adan Faarax iyo wasiirka maaliyadda Axmed Shidde.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/12/parlement.jpg 184 274 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-12-21 09:59:202018-12-21 09:59:20Baarlamaanta itoobiya oo ansixiyey sharciga xuduudaha iyo aqoonsiga!
Daawo/Akhri/Dr Aby Ahmed oo 3000 Labeentii Oramada kumuusanaabay kana dalbaday... In kabadan 50-kamida saraakiisha & madaxdii mamulkii Dumay ee Cabdi iley...